ODD 5 - Miralenta - Tily eto Madagasikara
Tanjon'ny Fandrosoana Lovainjafy
ODD 5 - Miralenta
Mitovy avokoa ny olombelona rehetra eo am-pahaterahany, na lahy na vavy. Manana andraikitra koa ise hitarika ny fiaraha-monina hanome sehatra sy anjara mitovy ny olona rehetra na lahy na vavy.
Tanjona 5 : Tratrarina ny fitovian’ny lehilahy sy ny vehivavy ary atao izay hahavitantenan’ny vehivavy sy ny ankizivavy.
5.1 Faranana ny fanavakavahana atao amin’ny vehivavy sy ny ankizivavy, amin’ny endriny rehetra manerantany.
5.2 Fongorina eo amin’ny fiainam-piarahamonina sy ny fiainana manokana ny endrika herisetra rehetra atao amin’ny vehivavy sy ny ankizivavy, anisan’izany ny famarotana sy ny fanararaotana ara-nofo ary ireo karazana fanararaotana hafa.
5.3 Foanana ireo fomba rehetra manimba tahaka ny fanambadian’ny ankizy, ny fanambadiana aloha loatra na ankaterena sy ny famorana ny vehivavy.
5.4 Manome toerana ny fikarakarana sy ny raharaha an-tokantrano tsy andraisam-bola ary manome lanja izany amin’ny alalan’ny anjarabirikin’ny fikarakarana ny daholobe, ny fotodrafitrasa, ny politikan’ny fiahiana ara-tsosialy, ny fampiroboroboana ny fizarana asa sy andraikitra ao an-tokantrano sy anaty fianakaviana, araka ny toejavatra isampirenena.
5.5 Miantoka ny fandraisana anjara feno sy mahefa ny vehivavy sy ny fahafahany miasa amin’ny sehatry ny fitantanana, amin’ny fomba sahala, na inona na inona dingam-pandraisam-panapahankevitra, na ara-politika na ara-toekarena, na ara-piarahamonina.
5.6 Miantoka ny fahazoan’ny rehetra fikarakarana ara-pahasalamana ara-pananahana sy ara-piterahana. Atao izay hahafahan’ny tsirairay mampihatra ny zony mikasika ny fiterahana, araka ny fanapahankevitra tamin’ny Fandaharanasa noraisina tamin’ny fihaonambe iraisam-pirenena mikasika ny mponina sy ny fampandrosoana sy ny Fandaharanasan’i Beijing ary ireo antontantaratasy farany mikasika ireo fihaonambe fijerena ifotony ny zava-misy taorian’izay.
5.a Manatanteraka fanavaozana hahafahan’ny vehivavy manana zo mitovy amin’ny lehilahy amin’ny fisitrahana fampitaovana ara-pihariana, tahaka ny fananan-tany sy ny fahefana amin’ny tany sy ireo karazana faripananana, tolotra ara-bola, lova, loharanonkarena voajanahary, manaja ny lalana mihatra eo amin’ny firenena.
5.b Manamafy ny fampiasana ny haitao tsy azo idivirana, indrindra ny informatika sy ny serasera mba hampiroborobo ny fahavitantenan’ny vehivavy.
5.c Mampihatra politika tsara rafitra sy fepetra araka ny lalana azo ampiharina ho fampiroboroboana ny fitovian’ny lehilahy sy ny vehivavy sy ny fahavitantenan’ny vehivavy sy ny ankizivavy rehetra na inona na inona sehatra ary manamafy ny rafitra efa misy mikendry izany.
Hitrandraka misimisy kokoa :